Goobaha Canshuur Diyaarinta ee Bilaashka ah (Free Tax Site - Somali) | Minnesota Department of Revenue
Goobaha Canshuur Diyaarinta ee Bilaashka ah (Free Tax Site - Somali)
Maya, Goobaha canshuur xereynta ee bilaashka ah hadda waa xiran yihiin. Fadlan boggaan soo booqo marka la gaaro bisha Janaayo, si aad u ogaato goobaha furan 2022.
Goobo badan oo diyaarinta canshuur celinta oo bilaash ah ee ku taalo Minnesota ayaa loo hakiyay ama loo xadeeyay adeegyadooda sabab la xiriirto COVID-19. Hel goobo furan, saacadaha, iyo warbixinta xiriirka oo jaheynta Goobaheena Diyaarinta Canshuur Celinta Bilaashka ah.
Waad u qalmi kartaa inaad koronto ahaan ugu xareysid celintaada si bilaash ah. Si aad u aragtid haddii aad u qalantid, fiiri liIskeena oo bixiyayaasha xareynta korontada ah.
Wixii aqbaaro badan oo canshuurta gobolka iyo warbixinta ah, fiiri Jawaabteena ku aadan COVID-19.
Miyaan u qalmaa diyaarinta canshuurta bilaashka ah? [+]
Guud ahaan waxaad caawimaad ka heli kartaa goobta VITA haddii mid ka mid ah waxyaabaha soo socda ay run yihiin:
Hadii aad tahay 60 sano jir ama kaweyntahay.
Hadii aad tahay qof naafo ah.
Hadii aad kuhadasho ingiriis kooban ama aanad kuba hadlin.
Hadii dakhligaaga sanadeed uu kayaryahay 57,000.
Sidee ku helaa goob canshuur xereyn bilaash ah oo igu dhow? [+]
Maxaan hore u soo qaataa? [+]
Maxaan hore u soo qaataa – si canshuurta la iigu xereeyo?